फेसबुकका शुभेच्छा र जीवनका वास्तविकता – मझेरी डट कम
२–‘तँ के र को होस् अनि कत्ति पानीमा छस्, हामीलाई पूरापूरी थाहा छ । तँलाईं यही धर्तीमा बाँच्नु छ भने होस्को दबाई खाएर काम गर् । हैन धर्तीबाटै सुइकुच्चा ठोक्नुछ भने आफ्नो मनमौजी गर् । आफ्नो अहमता प्रदर्शन गर्दै हिँड् । मृत्युको मुख देखेको छैनस्जस्तो छ । यो अन्तिम चेतावनी हो, अब फुकीफुकी पाइला चालिनस् भने तँ नन्दलालको रूपमा कदापि रहँदैनस् । तँ नन्दलाल हैन गन्देलाल हुन्छस्, गन्देलाल, बुझिस् ? पहाडपर्वतका गुहेकीराहरू मैदानमा झरेर गुहुमुत गर्ने जमाना गए….कुरो सुन्दै छस् हैन…?’
2 thoughts on “फेसबुकका शुभेच्छा र जीवनका वास्तविकता”
ks July 14, 2013 at 3:42 pm
बडो मार्मिक र
nandalal.acharya July 16, 2013 at 4:14 pm
Shubhekchhaka lagi puhah thanks…
Maile mailma pani kehi lekhya chhu……
Sadbhab jari rahos….!